Sidan Ayey Dunida U Muuqan Doontaa Marka La Gaaro Sanadka 3000 | Xaqiiqonews
Sidan Ayey Dunida U Muuqan Doontaa Marka La Gaaro Sanadka 3000
Dabeecada noolasha aadanaha ayaa marba marka ka sii danbeyso sii hormareysay waxaana dadku ay ku talaabsadeen hor umar dhinac waliba ah,hase yeeshee in la sii saadaaliyo waxa dhici kara waa arin xiisaheeda gaarka ah wadata.
Ka dib muddo bani aadmiga ay isticmaali jireen lugahooda ama xoolo si ay ugu safraan meelo fog hadda waxaa yimid aalado casir ah oo sahlaya safarada hadii ay ahaan lahaayeen kuwa biiba,socda, xamaarta biyaha dushooda iwm.
ka dib muddo aadanaha ay ku hoyan jireen godadka iyo guryo aan hormarsaneen, hadda dunida wax ay gaaratay magaalooyin ay camiraayaan dhisamayaal dhaadheer.
hadaba dunida ayaa hadda sii hiigsaneysa hor u socod iyo in la soo kordhiyo waxyaabo cusub mar marka ka sii danbeysa, aqristow halkan waxaan kugu soo gudbineynaa qaar ka mid ah horumarada dunida ay hiigsaneyso marka la gaaro sanadka 3,000.(seddexda kun), qeybta hoose ka aqriso qaar ka mid ah riyooyinka aadanaha ee mustaqbalka soo aadan.
waa surwaal wato kursigiisa fadhiga waxaana dhaceysa in qofka gashan surwaalkan marka uu u baahdo in uu fadhiisto kaliya waxaa fidsanayaa kursiga ku sameysan surwaalkiisa mana u baahanaya kursi iwm.
Marka aan ka hadalno sanadka aynu hadda joogno caruurta iskuulada iyaga ayaa xanbaara boorsadooda si ay dugsiyada u aadaan, balse mustqablka boorsada iyada ayaa qaadi doonto ardayga,taasi macnaheedu waxaa waaye boorsada biibto oo ay ku howlanyihiin injineerada.
Waqtigan la joog dunida ayaa u sameysan qaab dal dal ah, balse hormuarka aadanaha ayaa suurtagal ka dhigi karta in dunida ay u qeybsanto kowkab kowkab taasi micnaheedu waxa waaye tusaale dadka ku nool kowkabka dhulka waxa ay qaadan doonaan Visa kale oo kowkab kale ah, si ay halkaasi ugu tagaan howlo ganacsi iwm.
Dunida maanta oo hubka ugu weyn ee lagu dagaalmi karo uu yahay nukliyer ayaa waxaa lga cabsi qabaa in qatarta sidani ay ka sii badato, waxaana cabsida ugu badan tahay in uu bilowdo dagaal xagga internet-ka taasi oo meesha ka saareysa madaxyada kantaalaha qaado iyo qalabkii kale ee la isticmaali lahaa, badalkeedana waxaa hawada qadadka internet-ka la isku soo marinayaa feyrusyo iyo sun nukilyeer ah.
Midka ka mid ah saadaaladii laga sii sheegay in ay u muuqan doonaan dadka marka la gaaro sanadka 3000 ayaa waxaad u maleysaa in uu na leeyahay sidan “Dadka oo dhan waxa ay u egaan doonaan soomaalida! ”
Dadka cadaanka ah maqaarkooda waxaa uu noqon doonaa madow, sababtoo ah qoraxda badan ee la filaayo, hadiiba uu bilowda isku socodka meerayaasha dadka waxa ay isku badali madow bunni ah, waxaana isku milmi doona jinsiyadaha.